घाँस का’ट्न नेपाल छिरेका भारतीय महिलामाथि प्रहरीलाई शं’का लागेर चेक’जाँच गर्दा यस्तो भेटियो !! « गोर्खाली खबर डटकम
घाँस का’ट्न नेपाल छिरेका भारतीय महिलामाथि प्रहरीलाई शं’का लागेर चेक’जाँच गर्दा यस्तो भेटियो !!
एजेन्सी, ३ भदौ । अस्थायी प्रहरी पोष्ट महादेवपट्टीबाट प्रहरी सहायक निरिक्षक मनोज कुमार सिंहको कमाण्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई गौर नगरपालिका वडा नं. ३ महादेवपट्टीस्थित दशगँजा क्षेत्रमा पक्रा’उ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।
घाँस का’ट्न नेपाल छिरेका भारतीय महिलाबाट प्रहरीले श्रोत नखुलेको लाखौ रकम ब’रामद गरेको छ। श्रोत नखुलेको ६ लाख ४० हजार सहित २ जना भारतीय महिलालाई रौतहट प्रहरीले बुधबार पक्रा’उ गरेको हो। पक्रा’उ पर्नेहरुमा भारत विहार स्थित सितामढी जिल्ला बैरगनिया ग्राम पन्चायत वडा नम्बर १ सिन्दुरीयाकी ४५ वर्षीया शान्ती देवी र सोही स्थान बस्ने वर्ष ४५ वर्षीया मिना देवी रहेकी छन्।
यो पनिः दैलेखको पश्चिम ठाटीकाँध गाउँपालिका –४ गैरागाउँमा पहिराले सात घर बगाएको छ । पहिराले घर बगाउँदा एक जनाको मृ’त्यु भएको छ भने एक जना बेप’त्ता र ६ जना घा’इते भएका छन् । मृ’त्यु हुनेमा ठाटीकाँध –४ का १२ वर्षीय जनक कठायत हुन् । मृ’तकका बुबा ४२ वर्षीय टीका, आमा ४० वर्षीया धनसरा, दिदी १७ वर्षीया बेल र दाजु १५ वर्षीय शम्शेर घा’इते भएको वडा नं ४ का वडाध्यक्ष रमेश सिंजापतिले बताए ।
उनले भने, “हामीले पहिरो गएको खबर २ बजे पाउनेबित्तिकै उद्धार ग¥यौंँ । एक जनाको अवस्था सिकिस्त छ । अन्यको अवस्था सामान्य रहेको छ ।” बेप’त्ता हुनेमा दानबहादुर कठायतका छोरा ११ वर्षीय लोकेश छन् । पहिरामा परी सोही ठाउँका ३४ वर्षीय महेन्द्र शाही र २३ वर्षीय गम्म नेपाली घाइ’ते भएका छन् ।